Ukukhokhelwa ukuthatha izinhlolovo? Izindawo ezihamba phambili nezinzuzo nezingozi | XperimentalHamid
Ukukhokhelwa ukuthatha izinhlolovo? Izindawo ezihamba phambili nezinzuzo nezingozi
September 2, 2020 by I-Javeria Dinar
Ukukhokhelwa ukwenza izinhlolovo
Ingabe ukukhokhelwa ukwenza ucwaningo kusemthethweni?
Khokhelwa ngokubuka amavidiyo
Amasayithi Akhokha Kahle
Ubani kuleli zwe angaxhumanisi ukwenza imali ngokushesha futhi kalula? Iningi labasebenzi emhlabeni jikelele likhathele yimisebenzi yabo engu-9 kuye kwengu-5. Abaningi babo bashintshele imisebenzi yabo kwezamabhizinisi noma kwiFreelancing.
I-Freelance isiphenduke umhlaba omusha wokuhola. Ngisho nakuwo wonke lo mbuso, ukukhokhelwa ukwenza izinhlolovo ezenziwa nge-inthanethi sekuyiyona ndlela elula futhi elula yokuthola imali online.
Lezi zinhlolovo zenziwa kakhulu yizinkampani zocwaningo zemakethe. Ngakho-ke, bathembela kubantu abanjengawe nami ngokwabelana ngemibono - kusuka kuDonald Trump kuya ocingweni lwakamuva. Banikela ngemali nemivuzo ngokubuyisela.
Ukuze uthole imali ethile ngokwenza izinhlolovo, umane ubhalise kula maphaneli enhlolovo. Kepha, ngeshwa, yonke indawo inenani elilinganiselwe lezinhlolovo ezikhokhelwayo inyanga ngayinye umuntu ngamunye.
Ukuthola imali ephezulu kuzinhlolovo ezenziwa online, kufanele ubhalise amasayithi amaningi ngangokunokwenzeka.
Qaphelisa! Amasayithi amaningi awasemthethweni futhi awasoze akukhokhela.
Amanye amasayithi awagcini nje ngokukukhokhela ngokwenza izinhlolovo kepha ngokubuka amavidiyo, ukudlala imidlalo, ukuthenga ku-inthanethi, ukusesha iwebhu, nokuthatha okunikezwayo.
Lo mbhalo uhlose ukudalula izingosi eziyishumi ezisemthethweni nezikhokha kakhulu online zokuhlola.
Inikeza ngezindlela ezahlukahlukene zokuthola imivuzo. Ibhonasi yokubhalisa ekhethekile engu- £ 10
Ama-Swagbucks yisiza senhlolovo esikhokhelwayo esikhulu kunazo zonke futhi esinokwethenjelwa kakhulu. Kuze kube manje sebekhokhe imali enkulu kakhulu. Imivuzo yabo ifaka phakathi imali, ama-voucher kanye ne-draw draw. Inani lenhlolovo ngayinye abayinikezayo ngamaphuzu angama-30 - 150 SB (100 SB = $ 1 noma £ 0.77)
Iwebhusayithi yombono we-proxy ethembekile yezinkampani eziningi eziholayo. Bafuna ukwazi ukuthi ucabangani ngemikhiqizo ethile, izinsizakalo nezinkinga ezithile.
Ngokubuya kwakho, uthola umvuzo ngendlela yezinkokhelo ze-PayPal, i-Amazon namavawusha asemgwaqweni. Ngokuhlola ngakunye kunikeza amaphuzu ayi-1,200 - 50,000 (amaphuzu ayi-80,000 akutholela ivawusha engu- £ 15).
Ngebhonasi yokubhalisa engu- £ 5 ekhethekile, yaziwa kakhulu ngocwaningo olufushane, olusheshayo ngesihloko ngasinye. I-OnePoll inikeza ucwaningo kwabezindaba nakuma-brand amakhulu. Imivuzo yabo iyinkokhelo yemali noma ye-PayPal. 10p - £ 1 yinani olithola kwinhlolovo. Umkhawulo wabo omncane womvuzo ngu- £ 40.
Phambilini baziwa ngokuthi yi-Mintvine, banikeza abathanda ucwaningo ivolumu ephezulu yocwaningo.
Ukugxila okuyinhloko kocwaningo lwabo ukucwaninga kwemakethe yomhlaba. Bakuklomelisa ngemali noma ngamakhadi ezipho. Inkokhelo yabo kuhlolo ngalunye iyahlukahluka. $ 10 (£ 8) umkhawulo omncane womvuzo.
Ukuhlolwa kweLifePoints kukuvumela ukuthi wenze i- £ 3-5 ngehora. I-LifePoints ngokuyisisekelo ukuhlanganiswa kweMySurvey ne-GlobalTestMarket. Izinkokhelo zePayPal, ama-Amazon namavawusha asezitaladini eziphakeme yimivuzo yabo. Kuhlolo ngalunye abanikeza cishe u- £ 1. Umkhawulo omncane womvuzo amaphuzu angama-550 (£ 5).
I-Panel Opinion ingesinye sezindawo zokuhlola eziku-inthanethi ezaziwa kakhulu ngo-2020. Inomkhawulo ophansi wenkokhelo. Bakuklomelisa kuphela ngendlela yemali ehluka kusuka ku-50p - £ 4 ngenhlolovo ngayinye. Banikela ngomkhawulo omncane womvuzo ongu- £ 10.
IPaneliBase ayisona isayithi lakho elijwayelekile lokuhlola. Bazokuvumela kuphela ukuthi ubambe iqhaza kuzinhlolovo ezihambisana nawe. Ngaphezu kwalokho, ungathola i- £ 3 ngokubhalisela nje. Imivuzo yabo ifaka phakathi imali, izaphulelo nama-draw draw. Umkhawulo omncane womvuzo ngu- $ 10.
Imibono Enenani iyingxenye yeqembu elikhudlwana locwaningo lwemakethe. Bathumela izinhlolovo ezenziwa nge-inthanethi kumalungu anamaphrofayli afana nezindawo kanye nezidingo ezibanzi.
Imivuzo ifaka imali namavawusha (ama-Amazon, ama-M & S, amaSainbury's, uJohn Lewis). Inani lenhlolovo ngayinye liyi- £ 1 - £ 5 ngomkhawulo omncane womvuzo ongu- £ 10.
IPrizeRebel yisiza esiveza ucwaningo kakhulu kunamanye amasayithi amaningi. Bakuklomelisa ngesimo semali yePaypal noma amakhadi ezipho. Ukunikezwa kwabo ngenhlolovo ngayinye ngu-50p - £ 20. Umkhawulo wabo omncane womvuzo ngu- £ 2.
Inani lemali ngenhlolovo ngayinye abayinikezayo ingu- £ 1- £ 10. Kepha kuya ngekhwalithi yezimpendulo zakho. Bakhiqiza idatha yezifundiswa nabaphenyi emanyuvesi amaningi aphezulu nasezinkampanini. Bakuklomelisa ngemali kuphela. Umkhawulo wabo omncane womvuzo ngu- £ 20 ngaphandle kwemali.
Into okufanele uzindle ngayo kukhona ezinye iziphambeko zalezi zinhlolovo ezenziwa online kuzo zombili izinkampani nabahlanganyeli. Kungenzeka kakhulu ukuthi abathathi bezinhlolovo bathole imivuzo ephezulu futhi bafanelekele izinhlolovo eziningi bangaqamba amanga mayelana nenani labantu.
Kungenzeka ukuthi abanaki izinhlolovo zangempela futhi baphendule ngokungahleliwe ukuthatha isikhathi esincane. Lokhu kubangela imininingwane engamanga etholwe yinkampani.
Ingozi yabahlanganyeli ukuthi isayithi lingathengisa imininingwane yokuxhumana nogaxekile.
Lokhu bekukhuluma ngokukhokhelwa ukwenza izinhlolovo. Sicela usitshele esigabeni sokuphawula uma uthola le ndatshana ifundisa.
Izigaba FYI, Izindaba, Tech Amathegi Ukuholelwa ukuthatha izinhlolo ngokusemthethweni, Ukukhokhelwa ukubukela ividiyo, Amasayithi akhokha kahle Imeyili kwemikhumbi
I-Itsnate TikTok: Kungani Amiswa Emasosheni ase-US?
Isahluko 665-666 seRevelnd Insanity Novel
Imicabango emi-2 ku- “Ukukhokhelwa Ukwenza Ucwaningo? Izingosi ezihamba phambili nobuhle nobubi ”
Ngo-Okthoba 22, 2020 e11: 08 AM
Unginike ukuqonda ngemisebenzi eku-inthanethi. Ngiwudinga kakhulu umsebenzi oku-inthanethi kepha angikaze ngiwuthole, ngicela ungazise kunoma yimuphi umsebenzi online ukuze ungigcine ngimatasa. Angisebenzi.
Ngo-Okthoba 23, 2020 e6: 55 PM
zama Noma yiziphi izindlela ezinikeziwe